Sida Loo tirtiro Koontada Instagram - Winches Club
Sida Loo tirtiro Koontada Instagram
Tirtir ama Dami Akoonka Instagram
Macno malahan sababta aad u tirtirto koontadaada Instagram, bahda warbaahinta bulshada ma rabaan inay kuu fududeeyaan. Haddii xisaabtaadu tahay xiran ama xiran, waxaad kaliya tirtiri kartaa koontadaada oo dib u bilaabi kartaa.
Adiga ma tirtiri karo ama si toos ah uga jooji koontadaada Instagram dalabka taleefankaaga. Si tan loo sameeyo, waa inaad tagtaa guriga bogga tirtirka xisaabta ee loogu talagalay.
Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad si joogto ah u tirtirto koontadaada Instagram, ama si ku -meelgaar ah u dami. Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo sameeyo mid ama kan kale, kaliya raac talaabooyinkeena fudud.
Sida loo tirtiro boggeyga Instagram?
Tirtiridda bartaada Instagram waa joogto – waxaad waayi doontaa sawiradaada oo dhan, fiidyowyada, kuwa raacsan iyo farriimaha – waxaad waayi doontaa joogitaankaaga baraha bulshada.
Haddii tani ay tahay waxa aad rabto inaad sameyso, markaa aan bilowno.
Tag bogga tirtirka koontada Instagram halkan.
Haddii aadan weli ku galin nooca biraawsarka shabakadda, waxaa lagaa codsan doonaa inaad sidaas samayso.
Waxaa laguu soo bandhigi doonaa shaashadan:
Xulo sababta aad u tirtirto koontadaada.
Geli eraygaaga sirta ah oo guji “Si joogto ah u tirtir koontadayda”.
Sideen u Damiin karaa Koontadayda ?
Xusuusnow inaysan suurtogal ahayn inaad ka noqoto koonto si joogto ah loo tirtiray. Haddii aad rabto inaad ka fogaato warbaahinta bulshada in muddo ah, daminta koontadaada ayaa laga yaabaa inay tahay ikhtiyaar ka fiican.
Burburinta koontadaada waxay ka dhigan tahay inay gebi ahaanba ka qarsoon tahay dhammaan isticmaaleyaasha Instagram, waadna dib u kicin kartaa haddii aad rabto.
Waxaad ka saari kartaa koontadaada nooca desktop -ka ee Instagram:
Ku xidh nooca desktop -ka ee Instagram -ka instagram.com
Guji badhanka “wax ka beddel astaanta” ku xigta magaca koontadaada
Guji “Si ku meel gaar ah u dami koontadaada” xagga hoose ee bogga.
Xaqiiji sababta aad u rabto inaad koontadaada u damiso, ka dibna geli eraygaaga sirta ah.
Guji Si ku meel gaar ah u dami xisaabta.
Marka xisaabtaada la damiyo, waad kicin kartaa mar kale wakhti kasta. Kaliya geli koontadaada sida caadiga ah koontadaaduna mar kale way muuqan doontaa.
Intaas uun baa ku jirta.
Xusuusnow in cabudhinta koontadaadu waa joogto ah, inta uu joojinta waa ku meelgaar ah. Haddii aad wax shaki ah qabtid, waxaan kugula talineynaa inaad si fudud u damiso koontadaada si aad mar kale ula tashato haddii aad rabto.